तालिवान राजमा गीतसंगीतमाथि प्रतिबन्ध, नाचगान लगायत टेलिभिजन समेत नपाइने - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ११ भाद्र २०७८, 8:25 pm
तालिवानको सत्तामा गीतसंगीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ। ‘मुस्लिम धर्ममा संगीतमा रोक छ। उनीहरुलाई कर गर्न भन्दा पनि नसुन्नका लागि हामीले विश्वास दिलाउन सक्छौ,’ तालिवान प्रवत्ता जाविहुल्लाह मुजाहिदले न्युयोर्क टाइम्ससँग भने।
तर, महिलाको सुरक्षालाई लिएर अहिले भइरहेका टिप्पणी गलत भएको मुजाहिदले बताए। महिलाहरु सधै घरभित्र बस्नु नपर्ने र आफ्नो काममा फर्किन सक्ने प्रवत्ता मुजाहिदले बताए।
सन् १९९० को दशकमा तालिवान शासनकालमा संगीत, टेलिभिजन, र सिनेमामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, अमेरिकी सरकारले उनीहरुलाई सत्ताच्युत गरेपछि अफगानिस्तानमा गीत संगीतमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
के हो सरिया कानुन, कस्तो छ सजायको व्यवस्था?
अफगानिस्तानलाई नि’यन्त्रणमा लिएको तालिबानले देशमा सरिया कानुन लागू गर्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानका प्रवक्ताले मिडिया र महिला अधिकारजस्ता मुद्दाहरू इस्लामिक कानुनले गरेको व्याख्या अनुसार हुने बताइसकेका छन्। तर, तालिबानले अहिलेसम्म यसबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन।
तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। त्यतिबेला महिलाहरूलाई काम गर्न र शिक्षा लिन अनुमति दिएको थिएन। आठ वर्षकै कलिलो उमेरमा बालिकाहरूले बुर्का लगाउनुपर्थ्यो। यतिमात्र होइन पुरुष साथमा नभएसम्म महिलालाई बाहिर जान दिइन्नथ्यो। तालिबानले बनाएका नियमको अवज्ञा गर्ने महिलाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा को’र्रा हानिन्थ्यो।
सरिया के हो?
सरिया कानुन इस्लामको कानुनी प्रणाली हो। सरिया कानुन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण किताब कुरान र इस्लामी विद्वानहरूको फैसलामा आधारित रहेर बनाइएको कानुन हो। सरियाको शाब्दिक अर्थ ’पानीको एक स्पष्ट र व्यवस्थित बाटो’ भन्ने हुन्छ।
सरिया कानुनले जीवनको जिउने बाटो बताउने उनीहरूको विश्वास छ। सबै मुसलमानहरूले सरियाको पालना गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। सरियामा प्रार्थना, उपवास तथा गरीबहरूलाई दान गर्नका लागि निर्देशन दिइएको हुन्छ।
यसको उद्देश्य खुदा (भगवान) को इच्छाअनुसार मुसलमानलाई आफ्नो जीवनको हरेक पक्षलाई कसरी जिउने भनेर सम्झाउन सहयोग गर्ने हो।
सरियामा कडा दण्ड के छ?
सरिया कानुनले अ’परा’धलाई दुई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलो, ’हद’, जुन गम्भीर अ’प’राध हो। जसका लागि अपराध तय गरिएको छ। दोस्रो, ’तजीर’ अपराध हो। यसको सजाय न्याय दिनेको विवेकमा छोडिएको हुन्छ।
’हद’ वाला अपराधमा चोरीलाई राखिएको छ। जसमा चोरी गर्नेको हात काटेर सजाय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी परस्त्री वा परपुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध राख्नेलाई ढुङ्गाले हानेर मृ’त्युद’ण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ। ’हद’ अप’रा’धका लागि दण्ड तो’क्नुभन्दा अगाडि बलियो प्रमाणको आवश्यकता पर्छ।
धर्म त्याग्नेलाई के फाँ’सी हुन सक्छ?
धर्म त्याग्ने विषयमा मुसलमानहरूबीच नै ठूलो मतभेद रहेको छ। अधिकांश मुसलमान विद्वानहरू धर्मान्तरणको सजाय मृ’त्यु हुनुपर्नेमा एकमत छन्। तर, कतिपय मुस्लिमहरू धर्मान्तरणको सजाय अल्लाहलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन्। कुरानमा भने ’धर्ममा कुनै बाध्यता नभएको’ उल्लेख छ।